You meghere maka sistemụ njikwa ọdịnaya ọhụụ? | Martech Zone
Fraịdee, June 23, 2017 Sunday, June 25, 2017 Douglas Karr
Afọ ole na ole gara aga, 100% nke ndị ahịa anyị jiri WordPress ka ha usoro njikwa ọdịnaya. Naanị afọ abụọ ka e mesịrị na ọnụ ọgụgụ ahụ agbadala ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ. Ebe ọ bụ na m na-etolite na ịmepụta saịtị na WordPress ruo afọ iri ugbu a, m na-elekarị CMS ahụ anya n'ihi ihe ole na ole.
Ihe mere anyị ji eji WordPress
ịrịba isiokwu iche iche na nkwado. Saịtị dị ka Okwu bụ ọkacha mmasị nye m ebe m nwere ike ịchọta ndebiri kachasị ịtụnanya na obere ego anyị nwere ike mejuputa ma wuo maka ndị ahịa anyị. Anyị anaghịdị enye isiokwu isiokwu ebe ọ bụ na anyị nwere ike iwuli elu na a nwa isiokwu ma chee atụmatụ nne na nna niile dị ịtụnanya. Enwere ike iwu saịtị ndị pụrụ iche na obere oge.
Ngwa na mwekota iche iche na nkwado. N'ihi na ọtụtụ saịtị na-agba WordPress, ọ bụ ihe dị mkpa maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla chọrọ ijikọ na sistemụ njikwa ọdịnaya. Site email mgbere, CRM, ọdịda peeji nke ngwọta, wdg… ọ fọrọ nke nta ka o siri ike ịchọta ụlọ ọrụ na-adịghị ike.
ojiji dị ebe niile, yabụ ịchọta ndị ọrụ na ndị nchịkwa na-eji WordPress bụ ebe nkịtị. Pinggbagide CMS ọhụrụ nwere ike ịchọ oge ọzụzụ ọzọ n'ime ụlọ ọrụ, yabụ iji nke a na-ewu ewu nwere ike ime ka ihe ghara belata mgbu n'ime.
WordPress Jikwaa nyiwe Bochum dị ka Flywheel, WPEngine, arụsị, LiquidWeb, Na ọbụna GoDaddy, ọtụtụ ndị na-aghọkwa ebe nkịtị. Companieslọ ọrụ nchịkọta ndị okenye akwadoghị WordPress n'ezie n'agbanyeghị na ọ bụ ihe a ma ama ka ụlọ ọrụ na-anọkarị n'ọgụ n'etiti ndị ọbịa na onye nrụpụta ihe nwere ike ịbụ na saịtị ahụ adịghị mma. Ọrụ ndị a na-enye nchebe, nchekwa ndabere, netwọk nnyefe ọdịnaya, asambodo SSL, nlekota oru, nyocha, yana ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ iji mee ka saịtị gị ngwa ngwa ma kwụsie ike.
Ọ bụrụ na nke ahụ dị ka m na-ere WordPress, rapara n'ahụ m. Okwu bilitere nke na-amalite ime ka anyị kwado ndị ahịa na usoro njikwa ọdịnaya ndị ọzọ.
Ihe Mere Anyị Anaghị Eji WordPress
Sales - WordPress na-abụkarị bullish na ọrụ ọ bụla metụtara ahịa, isiokwu, ma ọ bụ mgbakwunye. Ha na-egbochikarị onye ọ bụla iwepụta ngwaọrụ n'ime sistemụ ha nke nyere ọnụahịa ego na ya. Ma ugbu a, ọ bụrụ na ị tinye ọnụ Jetpack, zutere gị ozi nag zụrụ ọrụ nkwado ndabere nke Automattic. Yabụ, na mberede ndị na-akwado ụzọ isi mepere emepe na-erezi ọrụ ha. Enweghị m obi ụtọ na ha na-eme nke a, ọ bụ naanị na ọ na-adịbu ya njọ.
Security - N'ihi na nke ewu ewu, WordPress aghọwokwa a lekwasịrị anya hackers. Otu mkpokọta saịtị nwere isiokwu mepụtara nke ọma na plugins iri na abụọ nwere ike ịhapụ oghere maka ndị na-agba ọsọ ka ndị nwe saịtị, ndị nchịkwa, na ndị ọbịa wee nọrọ na nche maka ịwakpo ma nọrọ n'elu isiokwu na ngwa mgbakwunye ngwa mgbakwunye.
Development - Enwere m onye ahịa nwere saịtị yana ụdị setịpụrụ plugins ugbu a nke nwere ihe ntinye 8 Google Akara ókwú na isi ha n'ihi na isiokwu ha na otutu plugins imewe ha nile na-enye ya dika oru. Agbanyeghị na enwere usoro iji hụ na akpọghị ọrụ karịa otu oge, ndị mmepe leghaara ya anya wee tinye amaokwu nke ha. Nke a na-ewute saịtị ahụ maka ọsọ na ogo… ma ọ bụghị ihe onye ọ bụla onye ọrụ ga-amata na-enweghị nsogbu. Omume na-adịghị mma na WordPress API mwekota na-abụwanye ihe nkịtị. Enwere m ọtụtụ tiketi na-emeghe na ndị mmepe iji dozie nsogbu ndị a. Ọtụtụ na-anabata, ọtụtụ anaghị aza.
Esemokwu - typicaldị ihu akwụkwọ na WordPress nwere ike ịnwe atụmatụ sitere na wijetị, menus, ntọala saịtị, ntọala isiokwu, na ntọala mgbakwunye. Oge ụfọdụ, idezi ihe n’otu peeji, m na-etinye nkeji iri atọ n’ịchọ ọnọdụ m! Ọ na-enye nsogbu na WordPress arụbeghị usoro kachasị mma iji hụ na ndị mmepe etinye ntọala ha ebe ọ dị mfe ịchọta ma melite.
Yabụ, olee usoro njikwa ọdịnaya ndị ọzọ anyị mejuputara? Mgbe anyị na-ele anya ịdabere na WordPress maka ya ike ịdị na-enyocha ihe ọchụchọ, anyị na-ahụ nsonaazụ dị ịtụnanya na usoro njikwa ọdịnaya ndị ọzọ:
Sitecore - anyị enyerela ndị ahịa ole na ole aka iji teknụzụ Microsoft na ụlọ ọrụ ha niile ma mejuputa Sitecore. Ọ bụ ezigbo CMS nwere nkwado dị ukwuu na oghere Enterprise. Anyị agaghị ala azụ ịkwado ya.
Squarespace - maka onye na-abụghị teknụzụ na-eme ya-onwe gị, echeghị m na enwere CMS ka mma karịa Squarespace. Enwere m otu onye ahịa nke wuru saịtị ha n'ime izu ole na ole na-enweghị ahụmịhe ọ bụla na nsonaazụ ahụ mara mma. Anyị nyeere tweak na-ege ntị na saịtị ahụ, mana mmejuputa WordPress agaghị enwe mmejuputa otu oge. Ebe nrụọrụ gara aga bụ WordPress na nchịkwa ahụ siri ike maka ndị ahịa ịnyagharịa na imelite. Ha nwere nkụda mmụọ na mbụ, ma nwee obi ụtọ ugbu a! Na Squarespace na-enyekwa ihe ecommerce.
Nka CMS - anyi na enyere onye ahia aka, kwaaji, na optimizing ha na saịtị na Craft CMS na m na-ama na ịhụnanya na ya mfe na ịdị mfe nke iji. Enwekwara ọtụtụ ntanetị nke plugins na-akwado nke ọma maka Craft CMS yana - na-eme ka ọ dịrị anyị mfe itinye nkwalite na saịtị maka ọchụchọ na njikarịcha ntụgharị.
Obi ọjọọ - uzo ozo nke N'onwe Gị nke na-aga n’ihu n’ihu ma ju anyi anya na njirimara ya bara ụba, gunyere ecommerce. Anyị enwetabeghị onye ahịa ebe a, mana usoro ntinye nke Weebly buru ibu buru ibu ma yie ka ọ nwere ihe niile chọrọ.
Enwere ndị ọzọ nọ ebe ahụ dịka Wix ma ọ bụ ụfọdụ proprietary CMS usoro. Wix nwere ụfọdụ nsogbu na Google na-edepụta saịtị ha mana ọ rụsiri ọrụ ike iji mee ka saịtị ha nwekwuo njikarị nchọta na saịtị ha edepụtara yana ndị ọzọ ọ bụla nọ ebe ahụ. Enwebeghị m ahụmịhe ọ bụla na Wix n'afọ ndị na-adịbeghị anya yabụ agaghị m ekpe ya ikpe ebe a.
Kedu atụmatụ CMS You chọrọ Afọ na-esote?
Wezuga nyocha ọchụchọ na ike mgbasa ozi mmekọrịta, anyị na-elegara ndị ahịa anyị anya iji hụ ihe ha chọrọ na sistemụ njikwa ọdịnaya. Ime nyocha ngwa ngwa nke sistemụ ndị ọzọ ha - ọkachasị CRM ha - nwere ike ime ka anyị tinye ha n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ n'ihi ịdị mfe nke mmejuputa iwu na nkwado maka njikọta nke ndị ọzọ. Ebe nrụọrụ weebụ karịrị broshuọ dijitalụ n'oge a - yabụ ịghọta etu CMS ga-esi daba na nke gị ahia ahia na ahia ahia dị oke mkpa na nhọrọ nchịkọta gị.
You na-ejide CMS gị?
Anyị na-elekwa anya na ndị na-adabere na ya. Ọ bụrụ na CMS enweghị ikike nke mbupụ ma ọ bụ mbubata na usoro ntụgharị, ọ nwere ike ịbụ ihe kpatara nchegbu. Were ya na ụlọ ọrụ gị na-arụ ọrụ na CMS ruo ọtụtụ afọ, na-ewu ikike na injin nchọta, yana na-ebugharị ọtụtụ ntụgharị naanị iji chọpụta na ị na-etinye CRM ọhụrụ nke anaghị akwado site na njikọta ọ bụla. Ndị otu gị kpebiri na ọ chọrọ ịkwaga ma CMS anaghị enye ngwaọrụ ọ bụla iji mee nke a.
Anyị ahụwo nke a ọtụtụ oge - ebe ụlọ ọrụ kegidere ma kpọchie ha n'ime ndị na-ere ha. Ọ na-akụda mmụọ na ọ dịghị mkpa. Nnukwu onye na-eweta CMS nke nwere obi ike n'onwe ya ga-enye ụzọ iji kwaga ma ọ bụ gbanyụọ ya kama ịnwa ịgbachi ndị ahịa ya.
Ngosipụta: Anyị ji njikọ njikọta na post a.
Tags: CMSNkwado cmscms mmepecms atụmatụcms mwekotacms ahịacms nchebeusoro njikwa ọdịnayacms ọrụ cmssaịtịsquarespacewee jirikwa yawix
Jul 4, 2017 na 5: 46 AM
Isiokwu na-akpali. Ezie na m na-eche WordPress bụ nnọọ ọgụgụ isi, Ọ na-enweghị ike ịzụlite ọkachamara ngwa. Maka mkpa ndị dị otú a, ị ga-achọ Sitefinity, Sitecore, Umbraco ma ọ bụ CMS ndị ọzọ yiri ya.